Somalia: Ciidamada amniga Puntland oo gacanta ku dhigay maandooriye - Wargane News
Home Somali News Somalia: Ciidamada amniga Puntland oo gacanta ku dhigay maandooriye
Somalia: Ciidamada amniga Puntland oo gacanta ku dhigay maandooriye
Ciidamada amaanka dowlad gobolleedka Puntland ayaa howlgal ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland waxaa ay ku soo qabteen dad ka ganacsan jiray waxyaabaha maanka-dooriya.
Muxyaddiin Axmed Muuse oo ka mid ah xaraakiisha ciidamada maamulka Puntland ee Garoowe ayaa Saxaafadda u sheegay in ay soo qabteen dadkii Maandooriyaha keeni jiray Garoowe iyo sidoo kale qaar ka mid ah waxyaabihii Maandooriyaha ahaa.
Waxaa uu sheegay in ciidamada ammaanka maamulka Puntland laga doonaayo in ay xoojiyaan howlgallada ay kula dagaalamayaan kooxaha Maandooriyaha ka ganacsadda.
Waxaa uu Maxkamaddaha Puntland ugu baaqay in ay xukun adag ku ridaan dadka ay soo qabtaan ciidamada Ammaanka.
Ciidamada dowlad gobolleedka Puntland ayaa bilihii lasoo dhaafay waday howlgallo ay kula dagaalamayaan dadka ka ganacsada Maandooriyaasha.
Ciidamada amaanka dowlad gobolleedka Puntland
Somaliland: Shirkadda Korantada INDHO-BIRTA Oo Mar Kale Cabasho Ka Muujiyey Wasiirka Macdanta Iyo Tamarta
Deg Deg: Xukuumada Somalilabd Oo Ka Hadashay Lix Hay,adood Oo Ay Ruqsadii Shaqo + Muuqaal
Somaliland: President Silaanyo & his delegation return to Hargeisa with Development projects
Somaliland: “Gebilay Way Caamaysan Tahay” Cali Gurray
Somaliland: Cali Guray Oo Ka Dareen Caliyay Wareejinta Dekedda Ber-Bera Ee DP Wald Qalinka Lagu Duugay…